04/10/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, April 10, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
မိမိအလှအပများ ထုတ်ဖော်ရန် ရဲတင်းလွန်းသော အမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ကူး၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တင် ရန် လူအချို့ အဆင် သင့် စောင့်နေကြလေပြီ
ယမန်နှစ်က သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေပေါ်မှာ မလုံ့တလုံ မပေါ်တပေါ် အ၀တ်အစားများဖြင့် ဖော်ချွတ် ကခုန် ခဲ့ကြသည့် အလွန် လန်း၊ အလန်းလွန် မြင်ကွင်း များကို ယခုနှစ် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးများတွင်လည်း သေချာ ပေါက် မပျက် မကွက် မြင်တွေ့ကြ ရပါဦးမည်။
အဆိုပါ ဆန်းကြယ်သည့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများ၊ ထူးခြားသည့်ကကွက်ဆန်းများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မကြည့် မမြင် လိုက်ရ သူတို့အတွက်လည်း စေတနာလွန်ကဲ ဖြန့်ဝေချင်သူတို့က ကင်မရာ များဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရိုက်ကူး၍ အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ များပေါ် သို့ မပျက် မကွက် တင်ဆက်ပေးကြဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
“ကတဲ့သူကလည်းက၊ ဖော်တဲ့သူကလည်းဖော်၊ ရိုက်တဲ့သူကလည်းရိုက်၊ တင်တဲ့သူကတင်၊ ကြည့်တဲ့ သူက ကြည့်၊ အားလုံး သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာမှန်နေကြတယ် ထင်တာပဲ”ဟု လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာ သုံးစွဲ သူ ကိုကျော်မင်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် ပိုမိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာကြသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တို့၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် သင်္ကြန် ဖက်ရှင် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုရဲတင်းလာနေခဲ့သည်။
မဟာ သင်္ကြန် ရိုးရာပွဲတော်တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မလျော်ညီသည့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများကို ရှောင် ရှားကြရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက ရှည်လျားသည့် စည်းကမ်းချက်များပါဝင်သော ကြေညာချက်အသီးသီးကို ထုတ်ပြန် ကြသော်လည်း မည်သူကမျှ အလေးမထားခဲ့ပေ။
ပေါင်ရင်းအထိ တက်ကပ်နေသည့် အတိုအပြတ်ဘောင်းဘီများ၊ လျော့ရိလျော့ရဲ ရင်သားလှစ်ဟ ရှေ့ ထွက်ပြ သည့် အပေါ်အင်္ကျီများဖြင့် စိတ်နှင့်လူနှင့် မကပ်အောင် မူးယစ်ရီဝေစွာ ကခုန်နေကြပြီး တစ်ခါ တစ်ရံ မဖွယ်မရာပင် လုပ်ပြတတ်သေးသည့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဓာတ်ပုံများက အင်တာနက် စာမျက်နှာ တွေပေါ် ပလူပျံလာခဲ့ရာ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူတို့အကြား အုတ်အော်သောင်းတင်း အငြင်းပွားခဲ့ကြ၊ ကဲ့ရဲ့ ရှုတ် ချခဲ့ကြသည်အထိ ယမန်နှစ်သင်္ကြန်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ အဖော်အချွတ်ဓာတ်ပုံများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တင်သည့်သူက အပြစ်ရှိသလော၊ ဖော်ချွတ် ကပြသည့် ကာယကံရှင်က အပြစ်ရှိသလောဟု မေးခွန်းထုတ်စရာလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူအချို့ကို မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် သုံးစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုကြည်ဝင်းက “ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနှစ်လည်းတင်မှာပဲဗျ။ မတင်စေချင်ရင် ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပေါ့” ဟု ဆို သည်။
အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ် ကိုနိုင်ကလည်း “ပြချင်လို့ ချွတ်၊ နာမည်ကြီးချင်လို့ ချွတ်၊ ဘယ်လိုချွတ်ချွတ် မျက်စိ ပါရင် ကြည့်ကြမှာပဲ။ အွန်လိုင်းတက်ပြီး ကြော်ငြာပေးတာ ကျေးဇူးတောင်တင်ရဦးမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ခန္ဓာ ငါးပါးပဲ။ ဖြစ်၊ ပျက်၊ ဒါပါပဲ။ မထူးဆန်းပါဘူး”ဟု မှတ်ချက်ပေးသည်။
အများစုကတော့ အဆိုပါဓာတ်ပုံများမှာ ရိုက်ကူးသူ၊ အင်တာနက်တင်သူက အပြစ်မရှိဘဲ လူမြင်ကွင်း ရှေ့တွင် ဖော်ချွတ် ကပြသည့် ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးများတွင်သာ တာဝန်ရှိကြောင်း တညီတညွတ်တည်း ပြောဆို ကြသည်။
နာမည်ကြီးချင်၍ဖြစ်စေ၊ လူအများရှေ့မှာ တမင်ပြသလို၍ဖြစ်စေ အဆိုပါ အမျိုးသမီးတို့ကို ရဲတင်းစေသည့် အဓိက အရာကတော့ အရက်သေစာနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်သင်္ကြန်၏ ဒီဂျေတီး လုံးများ အောက်မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမကျန် မူးယစ်ကခုန်ပျော်ပါးနေကြသည့် အံ့အားသင့်ဖွယ် မြင်ကွင်း များကြား မှာ ဘီယာဘူးခွံများ၊ အရက်ပုလင်းခွံများ ပြန့်နေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
“သင်္ကြန်က နှစ်တိုင်းပြောင်းလဲနေတာ ကြာပါပြီ။ ကြိုက်သူရှိလို့ ရဲတင်းပြကြတာပဲ။ အပေါစား ဖုန်းတစ်လုံး မှာတောင် ကင်မရာ ပါတာပဲလေ။ မီဒီယာမဟုတ်လည်း ရိုက်ပြီးတင်ကြမှာပဲ”ဟု ပြည်တွင်း သတင်းထောက် တစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
ထိုသို့ သင်္ကြန်မြင်ကွင်းဆန်းဓာတ်ပုံများ အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ် ရောက်ရှိလာသော်လည်း ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးက မကျေနပ်ပါက ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုရန် အခွင့်အလမ်း အလွန် နည်းပါး လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအများစု သုံးစွဲနေကြပြီး ပျံ့နှံ့မှုအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည့် လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် အများစုသော သုံးစွဲသူတို့မှာ မိမိတို့အမည်ကို အမှန်အတိုင်း ဖော်ပြခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တရားစွဲဆိုမည်ဆိုပါက မည်သူမည်ဝါမှန်း၊ မည်သည့်နေ ရာက သုံးစွဲနေမှန်း သိရခက်ခဲသည့်အတွက် ဤအချက်ကို အခွင့်အရေးယူကာ ဓာတ်ပုံများ လုပ်ကြံဖန် တီးတတ် ကြသည်။
“ဟိုတစ်လောက လွှတ်တော်မှာတင်တဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကိုတောင် ဖော်လို့မရတာ။ ကောင်မလေး ပုံတွေ တင်တာ ဘယ်သူမှန်း သိပ်မ သိနိုင်ဘူး။ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းသိတယ်ဆိုရင် အသရေဖျက်မှု ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ အရေး ယူခံရနိုင်တယ်။ ကာယကံရှင်က နစ်နာတယ်ဆိုပြီး တရားမကြောင်းအရ နစ်နာကြေး တောင်း လို့ရတယ်။ အခုတော့ အရေးယူဖို့ခက်နေသေးတယ်။ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေတော့ ရှိတယ်။ ဒီလို ကိစ္စတွေ မပါဘူး”ဟု ရှေ့နေကြီး အဘိဓမ္မဓရ ဦးခင်ဇော်(မရမ်းကုန်း)က ပြောကြားသည်။
နအဖအစိုးရက ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်ရေး ဥပဒေအခန်း (၁၂)၊ အပိုဒ် ၃၄၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ)၌ “အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦးဦးကို ထိခိုက်နစ်နာစေရန်ဖြစ်စေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန်ဖြစ်စေ သတင်းအချက်အလက်ကို အီလက် ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြုပြင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ထားသည့် အချက်အလက်ကို ဖြန့်ဝေခြင်းသည် လက်ရှိ တည် ဆဲဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“အီလက်ထရောနစ်တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာ တည်ဆဲဥပဒေရှိပေမယ့်လည်း အလွယ်တကူ ရိုက်ကူး တင်ပြလို့ ရနေတယ်။ ပညာပေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ သဘောနဲ့ဆိုရင် အီလက် ထရောနစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄(ဃ) နဲ့ ငြိစွန်းပါတယ်”ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးလင်းနိုင်မြင့် ကဆိုသည်။
လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူ တစ်ဦးကတော့ “သူတို့ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူတို့ ချွတ်ပြတာလေ။ ရိုက်တဲ့သူ ကလည်း သူ့မှာရိုက်လို့ရတဲ့ ကင်မရာ၊ ဖုန်း စသဖြင့် ရှိလို့ရိုက်တာ။ ဒီနေရာမှာ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲဖွလို့ တရားစွဲ မယ်ဆိုရင် အစကတည်းက မချွတ်ပြနဲ့ပေါ့။ သူတို့မချွတ်ပြရင် ရိုက်တဲ့လူလည်း ရှိမလာဘူး။ မရိုက်စေချင်ရင် လုံခြုံအောင်ဝတ်ပေါ့”ဟု သူ၏အမြင်ကို ပြောသည်။
(ခ) အများပြည် သူဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ၊ အနီးအနားတွင်ဖြစ်စေ ညစ်ညမ်းသော ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း၊ စကား တစ်မျိုးမျိုးကို ရွတ်ဆိုခြင်း၊ သီဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း တစ်ခုခုပြုလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လ အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟူ၍ ဖြစ် သည်။
“ဒီနေရာမှာ သင်္ကြန်အလည်ထွက်တဲ့ သူတစ်ဦးဦးသည် ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွင် မသင့်တင့် မလျောက် ပတ်သည့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ အမူအရာ၊ အပြောအဆို တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရင် အပေါ်ကပုဒ်မနဲ့ ငြိတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အမူအရာ၊ အပြောအဆိုဟာ အများအမြင်မှာ သင့်ခြင်း၊ မသင့်ခြင်း ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ အငြင်းပွားမှုရှိနိုင်ပါတယ်”ဟု ဥပဒေအထူးပြုဖြင့် ကျောင်းပြီးထားသော ကိုဝဏ္ဏစည်သူက အထက်ပါ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်သည်။
အထက်ပါ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မမှာ မူလပထမပြုလုပ်သူ ကာယကံရှင်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီး ဆက်လက်၍ ရာဇ သတ်ကြီး တွင် ပုဒ်မ ၄၉၉ ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“မည်သူမဆို နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖတ်ရှုစေရန် ကြံရွယ်သည့် စကားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်အသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထင် ရှားသော ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်ဖြစ်စေ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အသရေကို နစ်နာစေရန် အကြံဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ ထိုသူနှင့်စပ်လျဉ်းသော စွပ်စွဲခြင်းသည် ထိုသူ၏ အသရေကို နစ်နာစေမည်ဟု သိ လျက်နှင့်သော် လည်းကောင်း၊ ထိုသို့ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိလျက်နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသူနှင့် စပ် လျဉ်းသော စွပ်စွဲချက်ကိုပြုလျှင် သို့တည်းမဟုတ် ကြေညာလျှင် အဆိုပါလူ၏ အသရေကို ဖျက်သည် မည်၏”ဟု ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်မှာတော့ မူလပထမပြုလုပ်သူ ကာယကံရှင်၏ဓာတ်ပုံကို ထိခိုက် နစ်နာစေ လိုသည့် သဘောဖြင့် ဖြန့်ဝေခြင်းပြုလုပ်သူအပေါ် သက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအချက်ကို ကိုဝဏ္ဏစည်သူက အောက်ပါ အတိုင်း ထပ်မံသုံးသပ်ပြသည်။
“အဲဒီလိုဆိုထားတော့ သင်္ကြန်မှာ သင်္ကြန်ကားနဲ့ အလည်ထွက်တဲ့သူ တစ်ဦးဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံကို သူ့ရဲ့အသရေ ပျက်စေ တဲ့ သဘောနဲ့ အင်တာနက်မှာ ဖြန့်ဝေရင် အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲနိုင်တဲ့သဘောပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အသရေ ဖျက်မှုမှာ တခြားခြွင်းချက်တွေ ရှိသေးတယ်။ ဥပမာ-စင်ပေါ်တက်ပြီး ဖျော်ဖြေတဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ပုံကို အင်တာ နက်မှာ ဖြန့်ဝေေ၀ဖန်ခြင်းဟာ အသရေဖျက်မှု မမြောက်ပြန်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖျော်ဖြေ တယ်ဆိုကတည်းက လူအများကို မြင်တွေ့စေချင်တဲ့ သဘောပါပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ”
သင်္ကြန်ဟူသည် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပွဲတော်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက် ၍ သက်ဆိုင်ရာမှလည်း လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့် ညွှန်ကြားခြင်းသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်း ကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကလည်း လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်ကို တိုက်တွန်းပေးရုံသာ ဆောင်ရွက်နိုင် ပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလဲလာသည်ဆိုသော်လည်း အလွန်အကျွံ သရုပ်မပျက်စေရန် မိမိကိုယ် ကိုထိန်းသိမ်း ရန်မှာ လူငယ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများအနေနှင့်လည်း အပျော်မလွန်စေရန် သတိပြုရန်လိုအပ်ပြီး မိမိကို မလိုလားသူက မိမိအပျော် လွန်နေသည့် ဓာတ်ပုံကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုက်ကူးဖြန့်ဝေပါက ကာယကံရှင်သာ နစ်နာလိမ့်မည် ဖြစ် သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ သုံးစွဲသည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကလည်း “ဘယ်လောက်ပဲ ခေတ်မီမီ၊ ဘယ်လောက် ပဲ တိုးတက်တက်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ စောင့်ထိန်းသင့်တာ စောင့်ထိန်း ရမှာပဲ။ အရမ်းခက်ခဲတဲ့ အစဉ်အလာတွေမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို အရောင်တင်ပေးတဲ့ အစဉ်အ လာတွေပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရန် သင်္ကြန်မှာ ရိုးရာဖျက်တဲ့လူတွေကို တစ်လလောက် အချုပ်ထဲ ထိန်းသိမ်း ထားစေချင်တယ်”ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးလင်းနိုင်မြင့်ကလည်း “လူငယ်တွေဆိုတာ အများစုက ရင့်ကျက်မှု လိုအပ်သေး တယ်။ လူကြီးသူမတွေနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သွန်သင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ကိုလည်း မပျက်ပြားစေဖို့ ဦးဆောင်ထိန်းသိမ်းကြရမှာပါ”ဟု မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်သည် ပိတောက်တစ်ခက်၊ ရေစင်ပက်ဖြန်း၊ အေးချမ်းသာယာ၊ ယဉ်ကျေးစွာသည့်၊ တို့ရိုးရာမှ သွေဖည်ကာ အရက်၊ ဘီယာ၊ သန္ဓေတားဆေးနှင့် ကွန်ဒုံးများ ရောင်းအားကောင်းသော၊ ဟိုတယ်ခန်း များ ပြည့်နှက်နေသော၊ မိန်းကလေးအချို့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု အလန်းလွန်နေသော ခေတ်ဆန်း တစ်ခေတ် ကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖြတ်သန်းလာနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မိတ္ထီလာမီး ကွန်မြူနစ်များ မွှေးဟု ဦးအောင်သောင်း ပြော
ဧပြီလ ၉ ရက် UMFCCI အဆောက် အဦးတွင် ပြုလုပ်သည့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်သောင်း ကို အတူတွဲ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး ယခင် အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး သန်းရွှေ၏ ညာလက်ရုံး အဖြစ် လူသိ များသူ ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင် သောင်း က လွန်ခဲ့သောလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မူဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး ပဋိပက္ခ များတွင် ကွန်မြူနစ်များ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဗဟိုအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်သောင်းက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရစ်မစ်ချယ်နှင့် မိထ္တီလာမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မငြိမ်သက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြစဉ် ယင်းသို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ် မြန်မာသံတော်ဆင့်တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်။
ယခုလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင်လည်း ဦးအောင်သောင်းက သူ၏ပြော ကြား ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကြား ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ပဋိပက္ခများ ကို ကွန်မြူနစ်များက စတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ရှိနေပါသလားဆိုသော မေးခွန်း ကိုဖြေကြား ရာတွင် “သူတို့ (ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ပါဝင်မှုရှိမရှိ ဆိုတာ ကျနော် မသိပါဘူး။ ကျနော်တို့မှာ ခိုင်မာ တဲ့သက်သေ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။ ကျနော်က ဒီ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ မှတ်ချက်ပေး ခဲ့တာပါ” ဟု ဆိုသည်။
“ကွန်မြူနစ်ပါတီ နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတယ်လို့ ကျနော်မပြောပါဘူး။ ဆူပူမှုတွေနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေ ရှိနေတယ်လို့ပဲ ကျနော် ဆိုလိုခဲ့တာပါ” ဟု ဦးအောင်သောင်းက ထပ်ပြောသည်။
ပဋိပက္ခများသည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသများတလျှောက်ပြန့်ပွားသွားခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၈ ရက် အတွင်း မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁ မြို့နယ်မှ ပြည်သူများ ထိခိုက်ခံစားခဲ့၏။ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိတ္ထီလာ မြို့တွင် ၄၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ ပြီး ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခံခဲ့ရသူပေါင်းမှာ ၉၃ ဦး အထိရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး ဆရာဝန်များအဖွဲ့၏အဆို မိတ္ထီလာ အစ္စလမ်စာသင်ကျောင်းရှိ ကျောင်း သား ၃၂ ဦး ပျောက်ဆုံးဆဲ ဟုသိရသောကြောင့် သေဆုံးသူ အများစုမှာ အဆိုပါ ကျောင်းသားများ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဖြစ်ရပ်များအတွင်း အဓိကအနေဖြင့် အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများနှင့် အမည်မသိလူတစု ပါဝင် ပတ်သက် ခဲ့သည်ဟု သတင်းများတွင် ဖော်ပြကြသည်။ အချို့ကမူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ အတွင်းမှ လက်ရှိအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရပ်များကို လက်မခံလိုသူများက အကြမ်း ဖက်သမား များကို အသုံးချ၍ ပဋိပက္ခကို ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
သို့ရာတွင် ဦးအောင်သောင်းက မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်တွင် အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်သူများတွင် တချို့က ထောင်မှ လောလောလတ်လတ် လွတ်လာသူတွေဖြစ်ကြောင်း၊ တချို့က ဘုန်းကြီးများ၊ တချို့က မြေအောက် လှုပ်ရှားရေး သမားများ၊ တချို့က ကွန်မြူနစ်ထောက်ခံသူများဟု ပြောခဲ့သည်။
ဦးအောင်သောင်းသည် ပါတီအပေါ် သြဇာညောင်းပြီး ပါတီတွင်းမှ ရှေးရိုးစွဲ ခေါင်းမာသော အဖွဲ့ဝင် တယောက် ဟု အများက ထင်မြင်ယူဆထားကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အာဏာရှိစဉ်က ညာလက်ရုံး သဖွယ် အားကိုးခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပြီး ဒီပဲရင်းအရေးအခင်းဟု လူသိများသည့် ၂၀၀၃ခုနှစ် တွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သော အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို အကြမ်း ဖက်တိုက် ခိုက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တွင် အခါတော်ပေး ကြိုးကိုင်ခဲ့သူအဖြစ်လည်း ထင်မှတ်စွပ်စွဲခံရ သူဖြစ် သည်။ ဒီပဲရင်းဖြစ်ရပ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူ အမြောက်အများ သေဆုံးခဲ့ရသည်။
ဦးအောင်သောင်း၏ ဖြေရှင်းချက်သည် ပြီးခဲ့သော ဆူပူမှုများကို ပြေငြိမ်းအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် အစိုးရ ၏ အားနည်းချက်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရမယ်ရှာ ပြောကြားခြင်း သက်သက် သာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲဘော်သံချောင်းက ဆိုသည်။
“ဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် သူတို့မှာ လုံးလုံးတာဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ သူတို့ သိနေပြီလေ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် သံအမတ် နဲ့ ဘယ်သူတွေပါတယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတော့ သက်သေပြစရာလည်း မရှိဘဲနဲ့ ရမ်းပြီးစွပ် စွဲလိုက်တာ”ဟု ရဲဘော်သံချောင်းက ဧရာဝတီသို့ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောကြား လိုက်သည်။
“ကျနော်တို့ကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ စိတ်ပူတယ်” ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် အစိုးရကို ၁၉၈၉ အထိ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ တော်လှန် တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအုံကြွမှုကို အကြောင်းပြု၍ အစိုးရက ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ပြင်းထန်စွာ နှိပ်ကွပ် လာသည့် အခါ ပါတီဝင်များနှင့် ပါတီကိုထောက်ခံသူများ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၁၉၉၀ နှစ်များတွင် ပါတီတွင်း အာဏာ သိမ်းသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ပါတီဝင်အမြောက်အများ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရသည်။
ဦးအောင်သောင်း ၏ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပတ်သက်သော စွပ်စွဲချက်များသည် လုံးဝ အဓိပ္ပါယ်မရှိကြောင်း ၁၉၈၈ ကျောင်းသား ကလပ်စည်း အတွင်းရေးမှူးနှင့် မြန်မာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဟောင်း ဒေါက် တာဇော်မင်းက ပြောသည်။ ပါတီဝင်အများစုသည် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေကြပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးလည်း မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်ခံကြကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“ကျနော် ပြောနိုင်သလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စတွေက ကျနော်တို့နဲ့ လုံးဝ မပတ်သက်ပါဘူး၊ အစိုး ရက တရားခံ ရှာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လက်ညိုးထိုးလိုက်တာပါပဲ” ဟု ကွန်မြူနစ် ပါတီဝင်ဟောင်း ဒေါက်တာဇော်မင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြနန္ဒာနှင့် ရေညိုညိုရစ်ကာ သန်းသော မန်းတောင်ရိပ်ခိုသီချင်း က ထီလှည်းပေါ်မှ လမ်းပေါ်လျှံကျ နေသည်။ လက်ချောင်း လေးများက အလိုအလျောက် ပေါင်ကိုပုတ်၍ စည်းချက်လိုက်မိသူကလိုက်၊ သီချင်း အတိုင်း လိုက်ညည်းမိသူက ညည်း နှင့်
ဓာတ်တစ်ပါးက လူအပေါင်းကို ကျကျနန စီးထားမိပြီဖြစ်သည်။ ဧပြီ ကာလ ချိန်ကျသောအခါဟု တကူး တကဆို စရာမလို။ မြန်မာတို့၏ နှစ် သစ်ကူးသည့်တန်ခူးလ။ ပျိုပျို အိုအို ကိုကို မမ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်း စုံ အားလုံး သိမ်းကျုံးပျော်ကြသည့် ရေသဘင်ပွဲတော်သင်္ကြန်သည် မကြာမီလာတော့မည် မဟုတ် လော။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် မှ ၁၃၇၅ ခုနှစ်သို့အပြောင်း ယခုနှစ် သင်္ကြန်စာကတော့ မည်သို့ဆိုသည် မသိ။
သိကြားမင်းသည်လည်း မည် သည့်ယာဉ်ကိုစီး၍ ဆင်းသည်မသိ။ တကယ်တော့ သိကြားမင်းမည်သည် ကိုစီး ၍ ဆင်းသည်ဖြစ်စေ အရေး မကြီးပါ။ ကမ္ဘာကျော်သော ပျော်ရွှင် ဖွယ်မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲအတွက် ပြည်သူ ပြည်သား အားလုံး၏ စိတ် ဝယ်
”နှစ်သစ် ကူးလို့ ချစ်ဦးကိုရှာဖွေ+++ ဘယ်ရပ်ဌာနေ++ဘယ်ဆီများသွားပါလိမ့်”ဟု ရေစိုဝတ်ဖြင့် ငယ်ချစ်ကို လွမ်းသူကလွမ်းမည်။
”မနှစ်ကပေး တဲ့ သူ့လိပ်စာ xx ရေ တွေစိုလို့ ပျက်ကုန်ပြီ”ဟု ရှာပုံတော် မင်းသားကြီးလုပ်သူက လုပ်ကြမည်။
သေချာ သည်က အားလုံး၏ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ စိတ်ဆန္ဒများအတိုင်း လွတ် လပ်ပျော်ရွှင်စွာ သင်္ကြန်ခါတော်မ လေ ရက်မြတ် မှာလေဟု နေချင်ရှာ မည်က မလွဲပါ။သို့သော် ——-။
”ကျွန်တော်ကတော့ လုံခြုံရေး ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုး စားလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့အနေနဲ့ သင်္ကြန်အတွက် လုံ ခြုံရေးကို ဝန်ထမ်းနှစ်ဆ တိုးမြှင့်ပေး သွားပြီး နေရာချထားပေးပါမယ်”ဟု ဆိုသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန် ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေ၏ စကားက မပြေးသော်လည်းကန်ရာရှိ၊ ‘သတိ’ သည် ပိုသည် မရှိ ဆိုသော အခြေ အနေတစ်ခု ရှိနေသည်ကို ဖွင့်ဟနေ သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
လူစုလူ ဝေးများဖြင့် တစ်ခဲနက် ပျော်တတ်သော သင်္ကြန်ကာလတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်များက မဆန်း။
သို့သော် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေ အထားက တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ခြေလှမ်းများ စနေချိန်တွင် မငြိမ်မ သက်နှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲစေရန် လူမျိုးရေးအမုန်းတရားကို အခြေခံ၍ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပဋိပ က္ခများ ဖန်တီးနေသကဲ့သို့ ရှိနေခြင်း။
ထို့အတွက် မလိုလားအပ်သော အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အဖျက်လုပ်ငန်း များမဖြစ်ပွားစေရန် သတိတမံÓဏ် မြေက တုပ် လုပ်ခြင်းဟု ဆိုရမည်။ ဤသည်ကား လူလုပ်သော အရှုပ် သို့မဟုတ် လူတို့မွှေးသော မီးမို့ သင်္ကြန် ကာလတွင် အားလုံးစည်းလုံး ညီညွတ်စွာ တွန်းလှန်ကာကွယ်ရမည့် အရာ။ ထိုအရာက မမြင်နိုင် သည်မို့ ဤမျှလောက်တော့ လူသည်မယုတ် ညံ့နိုင်ဟု ထားလိုက်ဦး။ သင်္ကြန်ကာ လတွင် မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင် ရမည့် နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး လူ သားတို့၏ အသိတရား နှင့်ပင်ဂရု ပြုကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအန္တရာယ်က ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည် အလွန်အမင်းအဆင့်မြင့် တက်မှုနှင့်အတူ ကျွတ်ကျွတ်ဆူပူ လွန်းသည့် နွေ။
ဤပြဿ နာက ပြီးခဲ့သည့်လွှတ် တော်၌ပင် မေးခွန်းထုတ်အရေးတ ယူလုပ်ရသည့် အခြေအနေဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ အပါ အဝင် မြို့ကြီးများ တွင် ကျရောက်နေသော ဓာတ်ရောင် ခြည်သင့်မှုကို ဖြစ်စေသည့် ခရမ်း လွန်ရောင်ခြည် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သင်္ကြန်တွင်းရေကစားမည့်ပြည်သူ များအတွက်ပါ ထည့်သွင်း၍ စမ်း ချောင်းမဲ ဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုးဝင်းက မေး မြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်ဆိုသည်က ရေသဘင်ပွဲ ဖြစ်၍ရေပက်မည်၊ ရေစိုမည်၊ နံနက် နေထွက်ချိန်မှစ မြို့အနှံ့လည်ပတ်ကြ မည်ဖြစ် ရာ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် နေအ ပူဒဏ်အောက် ရေစိုသင်္ကြန်နှင့်ခရမ်း ရောင်နွေဒဏ် မလွဲမသွေ ကြုံကြ ရ မည်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါမေးခွန်း အား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိ ယဝန်ကြီး ဒေါက်တာသိန်းသိန်းဌေး က ဖြေကြား ရာတွင် အဓိကအချက် အနေဖြင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်ရန် အရိပ်ရသော နေရာတွင်နေရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကို လူတိုင်းသိပြီးဖြစ် သော်လည်းအလွန်အရေးကြီးသော ကာကွယ်နည်းမှာ နေပူထဲတွင် မဖြစ် မနေနေ ရမည့် အချိန်မှလွဲ၍ ကြာ မြင့်စွာ မနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆို ပါသည်။
ရန်ကုန်သင်္ကြန်၏ ထုံးစံ အမိုး ဖွင့်ထားသော ကားများဖြင့်လည်ကြ ပြီး ကားကျပ်၊ လူကျပ်နှင့် မဏ္ဍပ် များရှေ့ တစ်မျှော်တစ်ခေါ် ရပ်တန့် စောင့်ဆိုင်းရစမြဲဖြစ်သည်။ အရင်လို ပါပဲဟူသော အသိဖြင့် အတာရေ သည် ဘေးကင်း၏ဟု ယုံစား၍ရနိုင် သော်လည်းလူသားများအတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသည့် ဓာတ်ရောင် ခြည်သင့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော ခရမ်း လွန်ရောင်ခြည် ( Ultra Violet Rays) အတွက်ေ တာ့ မဖြစ်မနေ သတိကပ်ရ မည်ဖြစ်သည်။လွှတ်တော်၌ ဒေါက်တာ သိန်းသိန်းဌေး၏ ဖြေကြားချက်တွင် လည်း သင်္ကြန် ဆင်နွှဲကြမည့် လူငယ် များ အနေဖြင့် ဝတ်စားဆင်ယင်ရာ တွင် မိမိတို့အရေပြားကို နေရောင် ခြည်နှင့် တတ်နိုင်သမျှ မထိတွေ့စေ သော မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများ ဖြင့် ဆင်နွဲကြ ရန် အရေပြားအထူး ကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ အကြံပြုချက် နှင့် ပြည်သူများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် အသိပညာ ပေးရန် စီစဉ်ထားရှိ ကြောင်း ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် နေ ရောင်ကာ လိမ်းဆေးလိမ်းရန်နှင့် နေကာမျက်မှန် တပ်ဆင်ရာတွင် လည်း မျက်မှန်တိုင်း မကာကွယ်နိုင် ကြောင်း၊ မျက်မှန်၏အညွှန်းတွင် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း ရေးသားပါရှိသည့် မျက်မှန်မျိုးမှသာ လျှင် အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးနိုင် ကြောင်း ပြည်သူများကို အသိပေးရာ တွင် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
”ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေရောင်ခြည် ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေပြား ကင်ဆာ ရောဂါက အဖြစ်အများဆုံးပဲ။ အဲ ဒါက နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ခရမ်း လွန်ရောင်ြ ခည်ကြောင့် အဓိကဖြစ် ပွားနိုင်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်ပြည် သူ့ဆေး ရုံကြီး အရေပြားအထူးကု ဌာနမှ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာလင်း ထက်ကလည်း ပြော သည်။ သင်္ကြန်ကာလ ထိုပြဿနာကာ ကွယ်ရန်အတွက် ၄င်းက”နေရောင် ကာကွယ်ဆီတွေ လိမ်းသင့် တယ်။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ လိမ်းတာက သာ မန်လိမ်းတာနဲ့မတူဘူး။ သင်္ကြန်တွင်း မှာ ရေစိုတဲ့ အတွက် မရဘူး။ ပျက် သွားနိုင်တယ်။ သင်္ကြန်တွင်းမှာလိမ်း တဲ့ဟာတွေက ရေစိုခံနိုင်တာ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ လိမ်းပေမယ့် လည်း ပွတ် မိရင် သုတ်မိရင် ပျက်သွားနိုင်တဲ့ အတွက် လိုအပ်သလို ပြန်လိမ်းရ မယ်” ဟု အကြံပြု သည်။
ထို့အပြင် အပြင်ထွက်လည် ပတ်ရာ၌ အဝတ်အစားအဖြူရောင် သည် နေရောင်ခြည် ကာကွယ် နိုင်မှု အားနည်း ပါးပြီး ရေစိုပါက နေ ရောင်ဖောက် ဝင်နိုင်သဖြင့် အရောင် တောက်တောက်နှင့် လက်ရှည်များ ဝတ်သင့် ကြောင်း၊ လေဝင်လေထွက် ကောင်းသည့် ချည်သားပွပွများဝတ် ဆင်သင့်ေ ကြာင်း ၄င်းက ထပ် လောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။ သေချာသည်က ယခုနှစ်သ င်္ကြန်တွင် သတိပြုဆင်ခြင်စရာတွေ က ပိုများ သည်က အမှန်။
မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဦးထွန်း လွင်ကတော့ ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကို ခရမ်းလွန်မဟာသင်္ကြန် ၂ဝ၁၃ ဟု ကင်ပွန်း တပ်ခဲ့ပြီး လူ့ခန္ဓာပေါ် အ ညွှန်းကိန်းမြင့် မားသည့် ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်များ လွန်ကဲစွာကျရောက် မိပါက အရေပြား ကင်ဆာ၊ အရွယ် မတိုင်မီ အရေပြားများရင့်ရော်ခြင်း၊ မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း၊ မျက်စိကင်ဆာနှင့် မျိုးပွားဗီ ဇပျက်စီးခြင်း(သားသမီးမရနိုင်တော့ခြင်း) စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ကြုံတွေ့နိုင် ကြောင်း ၄င်း၏ဝ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ရေးသားထားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ပတ်သက်၍ ၄င်းက ရှင်းလင်းပြထား ရာတွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆိုသည် မှာ လူသာ မန်တို့ မျက်စိနှင့်မမြင် နိုင်သော အလင်းပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ် ကြောင်း၊ အမြင်အာရုံကို ပေးနိုင် သည့်မြင်နိုင် သော အာရုံခွင်၏ အစွန်းဆုံးတစ်ဖက်ဖြစ်သည့် ခရမ်း ရောင်ခြည် ကို ကျော်လွန်ပြီး မြင်နိုင် ခွင်ပြင် ပသို့ ကျရောက်သွားသည့် ခရမ်း(အ)လွန်ရောင်ခြည်ဟု ခေါ် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UV ကို့ UVA/ UVB နှင့် UVC ဟူ၍ လှိုင်းအလျားတန်ဖိုးကွာခြားမှုအလိုက် ခွဲ ခြားထားနိုင်ကြောင်း။ အဆိုပါ သုံး မျိုးလုံးသည် လူများ၏ ကျန်းမာရေး ကို သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့်သူ ထိခိုက် စေလေ့ရှိပြီး ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်တွင်UVရောင်ခြည်များ၏ ၉၅ ရာခိုင် နှုန်းသည် UVA ရောင်ခြည်များနှင့် ဖွဲ့စည်း ထားကာ UVB ရောင်ခြည် များထက် အရေပြားတွင်း ပိုမိုနက် အောင်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး လူသား များ၏ဗီဇကလာပ်စည်း DNA များကို သွယ်ဝိုက် ဖျက်ဆီးထိခိုက်ပျက်စီးစေတတ်ကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
ကာကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍မူ ၄င်းက နံနက် ၁၁ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁ နာရီအတွင်း အထူးရှောင်ရှားသင့် ကြောင်း။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်း များ ပြန်လည်ကျဆင်း လာသည်အထိ နေပူထဲထွက်ခြင်းကို သတိထား သင့်ကြောင်း။ မလွှဲမ ရှောင်သာ နေပူထဲထွက်ကြရပါက ကာကွယ်မှုအနေနှင့် အနားကျယ် ပြန့်သော ဦးထုပ်(မက်ဆီကန်ခမောက် ကဲ့သို့ ဆောင်းကာ ဦးခေါင်း၊ မျက်နှာ၊ မျက်စိ၊ လည်ပင်း၊ ပခုံး စသည် များကို ကာကွယ်သ င့်ကြောင်း၊ ခြေလက် စ သည့်အပိုင်းများကိုလည်း လုံခြုံသည့် အဝတ်အစား (အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ ပုဆိုး) စသည်တို့ ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ေ ကြာင်း အသိပညာ ပေး ရေးသား ခဲ့သည်။
အဓိကအားဖြင့် မဟာသင်္ကြန် ကာလနှင့်ပတ်သက်၍ ¤င်းက”ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကျရောက်မှု ဟာ မြင့်မား နေဆဲပါ။ မဟာသင်္ကြန် ကာလမှာ ပိုမို မြင့်မားလာစရာအ ကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ ပထမအချက် ကတော့ သင်္ကြန်ကာလမှာနေပူထဲမှာကစားကြမှာဖြစ်လို့ ခရမ်းလွန်ရောင် ခြည်ကျေ ရာက်မှုမြင့်မားတဲ့ မွန်း တည့် ချိန်ကာလတွေမှာ ရေကစားသူ အများအပြားဟာ နေပူထဲမှာ ရပ်နေ ဖို့အခွင့် အလမ်းများ ပါတယ်။ ဒုတိယ အချက် ကတော့ ရေကစားမဏ္ဍပ် တွေမှာ ကားကျပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေများ နေတာကြောင့် နေပူ ထဲမှာ နေချိန် ကာလ ပိုမိုရှည်လျားလာနိုင်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ သင်္ကြန် ကာလမှာ အဝတ်အစားလုံလုံခြုံခြုံ မဝတ်ကြတဲ့သူတွေပိုများပါတယ်။ ဒါ ဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဘေးသင့်မှု အတွက် အကာအကွယ် မဲ့စေနိုင် ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အချက် ကတော့ တစ်ချိန်လုံး ရေတွေနဲ့ကစားနေတဲ့ သင်္ကြန်သဘာဝကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် တွေဟာ ရေစို နေကြ မှာဖြစ်ပြီ ရေနဲ့ နီးစပ်တော့ ရေရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သင့်မှု ကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့် တက်လာ စေနိုင်တဲ့အတွက်ပါ”ဟု ဦးထွန်းလွင် က ပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြခဲ့သည်။
ထိုထို့သောအခြေအနေများက သင်္ကြန်ကာလအတွက် ဆန်းသစ် သော စိန်ခေါ်ချက်များဖြစ်သည်။ အကြမ်း ဖက်မှု၊ အဖျက်အမှောင့်များ ဆိုသည် က တွေးကြောက်နေရမည် မဟုတ်သော်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ် မှုက မမှားပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန်အ ကြတ်နေ့ ဧပြီ ၁၅ ရက် နေ့က ကန်တော်ကြီး စောင်းရှိX2O မဏ္ဍပ် တွင် မသမာသူများ၏ လက်ချက် ကြောင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အပြစ် မဲ့ပြည် သူများ အသက်ဆုံး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြခြင်းက သာဓက ဖြစ် သည်။ ထိုကာလမှစ၍ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များ၌ လုံခြုံရေးအတွက် အရေးထား ကာကွယ်လာကြသည်က အရှုံးထဲမှ အမြတ်။
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်တွင် ရေကစားမည့် သုံးနှစ်သက်တမ်းရှိပြီ ဖြစ်သော Play Boys မဏ္ဍပ်မှ စီစဉ် သူ ကိုမင်းအိမ်စည်က ”လုံခြုံ ရေး ပိုင်းအတွက် လွန် ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်(မေးမြန်းသည့်နေ့ ၅-၄-၁၃) လောက်က မြန်မာ နိုင်ငံ လုံခြုံ ရေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရဲမှူးကြီး တွေက အစည်းအဝေးေ ခ်ါပါတယ်။ သူတို့က လုံခြုံရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး စည်းကမ်းချက် ၂ဝ ထုတ်ပြန်တယ်။ အဲဒီ ၂ဝ အတိုင်း လိုက်နာရမှာပါ။ လုံခြုံရေးပိုင်းရော၊ ဝတ်စား ဆင်ယင် မှု အပိုင်းကအစထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ လည်း အဲဒီအ တိုင်း လိုက်နာသွားဖို့ရှိ ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက် ၍လည်း ¤င်းက ”လုံခြုံရေးကိုတော့ ကျွမ်းကျင်လုံခြုံရေး ခေါ်သွားမယ်။ တချို့က လုံခြုံရေးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အင်္ကျီဝ တ်ပြီး ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ပေါ့။ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကနေ ငါး ယောက် တစ်ဖွဲ့ပုံစံမျိုး ပြန်ပြီးစီမံခန့်ခွဲ နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ထားပါ တယ်။ လုံခြုံရေးအင်အား ၄ဝ နဲ့ ၆ဝ ကြား ထားရှိမှာပါ” ဟု ဆိုပြီး ကာ ကွယ်စစ်ဆေးမှုအရ ”အဝင်က နှစ် ဆင့်ရှိမှာပါ။ မဏ္ဍပ်အဝင်နဲ့ အ ရောင်း ပေါ့။ အဝင်မှာကတည်းက တစ်ခါစစ်တယ်။ Ticket နဲ့ အဝင် အထွက်ကိုကြည့်ပြီး အပေါ်အတက် မှာတော့ တုတ်၊ ဓားစတဲ့ လက်နက် တွေကို သေချာ စစ်ဆေးသွားမှာပါ။ လူစိမ်းအဝင်မရှိအောင် နှစ်နာရီ ခြား တစ်ခါ ကတ်တွေကို စစ်ဆေးသွားမှာ ပါ” ဟု ဆိုသည်။
သင်္ကြန်အတွက် ပြည်သူတွေ စိုးရွံ့နေမှုအပေါ် သုံးသပ်ရာတွင် ¤င်းက ”ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပြီးဆုံး စေ ချင်တယ်။ အားလုံးကလည်း ညီအစ် ကိုမောင်နှ မတွေလေ။ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ခံထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံမှု ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံမှုပါ။ သူတို့ ထိခိုက်မှုရှိရင် ကျွန်တော်တို့က တာဝန် ယူထား တဲ့အတွက် ကျွန်တော့် မှာ အများကြီး တာဝန်ရှိတယ်။ ကျွန် တော့် လုံခြုံရေးကဲ့သို့ပဲ သူတို့လုံခြုံ ရေးဖြစ်အောင် အစွမ်း ကုန်လုပ်ပေး ထားမှာပါ” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးအတွက် လူရွေးချယ်အသုံး ပြုထားမှုအပေါ် ”လုံခြုံရေးအတွက် လုံခြုံရေး သီးသန့်လုပ်တဲ့သူတွေကိုပဲ ခေါ်ဖြစ် မှာပါ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း လုပ်ငန်း ရှိတယ်။ အဲဒီကလူတွေကို ဘာပဲ ပြောပြောခေါ်လို့ရတယ်ဗျာ။ သက် သာတယ်။ တစ်ရက်သုံးထောင်ပေး တယ်။ ထမင်းစားရမယ်ဗျာ။ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ပြီးသွားရင် အရက်သောက်လို့ ရမယ်။ အဲဒါမျိုးထက်စာရင် လုံခြုံ ရေးကုမ္ပဏီတွေကနေ ခေါ်မှာပါ။သူတို့ကျတော့ တာဝန်အပေါ်မှာ လေးလေးနက်နက် ရှိတာပေါ့ဗျာ” ဒါ့အပြင် မဏ္ဍပ် အတွင်း အပြင်လူ ဝင်လို့မရအောင် ဝင်းခတ်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ပဋိပက္ခ တားဆီး မနိုင်ဖြစ်တော့မည်ဟု ကုလသတိပေး
Posted by drmyochit Wednesday, April 10, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကိုရီးယား ကျွန်း ဆွယ်က ပဋိပက္ခဟာ တားမနိုင်ဆီး မနိုင် ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေး မှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြောက် ကိုရီးယားအနေနဲ့ ရန်လိုတဲ့ အပြော အဆိုတွေကို လေသံလျှော့ ဖို့လည်း ထပ်မံ တိုက်တွန်း လိုက်ပါ တယ်။
အတွက် မှားလို့ ဒါမှမဟုတ် ခန့်မှန်းချ က်လွဲတာကနေ သေးဖွဲတဲ့ ကိစ္စ ရပ်ဟာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ အခြေ အနေကို ဖန်တီး နိုင်တယ်လို့ မစ္စ တာ ဘန်ကီမွန်းက အီတလီ နိုင်ငံ ရောမမြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောသွား တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တောင်-မြောက် ကိုရီးယား ၂ နိုင်ငံကြားက အအောင်မြင်ဆုံး ပူးတွဲ စီမံကိန်း တခုဖြစ်တဲ့ ဂယ်ဆွန်း စက်မှု ဇုန်ကို ဆက်လက် ဖွင့်ထားဖို့လဲ ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
မြောက် ကိုရီးယားဟာ စစ်ဖြစ်တော့ မှာမို့လို့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံထဲက နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ကမ္ဘာ လှည့် ခရီး သည်တွေ အားလုံးကို ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ခွာ သွားကြဖို့ မနေ့က သတိပေး ချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန် နိုင်ငံ ကတော့ တိုကျို မြို့ တော်က ပြည်သူ သန်း ၃၀ ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အမေရိကန်လုပ် ပက်ထရီယော့ ဒုံးခွင်း ဒုံးပစ် တပ်ဖွဲ့ တွေကို တိုကျိုက ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ တခြားစစ်စခန်း ၂ ခုတို့မှာ တပ်ဖြန့်ချထားလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
မြောက် ကိုရီယားဟာ သူ့ရဲ့ တာလတ်ပစ် ဒုံးကျည်ကို အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေကနေ ပစ်လွှတ်ဖို့ ပြင်ဆင် နေတာတွေ ပြီးစီး သွားပြီလို့လည်း တောင် ကိုရီးယားက ယွန်ဟက်ပ် သတင်းဌာနက မနေ့က သတင်း ထုတ်ပြန် သွားပါတယ်။
ပြုံယမ်း အစိုးရဟာ ဒေသတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တောင် ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန် စစ် စခန်း တွေကို ရန်လိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ခုထိ လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြားဖြတ်တွင် ခြိမ်းခြောက် မဲဆွယ်မှု ဖြင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မြို့ နယ် အတွင်းရေးမှူး အား ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၅ဝဝဝ ပြစ်ဒဏ်ချ
Posted by drmyochit Wednesday, April 10, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလတွင် ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီအားမဲပေးရန် ခြိမ်းခြောက် ပြောဆို ခဲ့ သည့်မြို့နယ်အဆင့်ရှိပါတီ အ တွင်းရေးမှူးကိုမင်္ဂလာတောင်ညွန့် တရားရုံးက အပြစ်ရှိကြောင်း ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားရုံး၌ တရားခွင် ၂ တွဲဖက် တရားသူကြီး ဒေါ်ဝင်းဝင်းနွယ်က ပုဒ်မ ၅ဝ၆ (က)ဖြင့် တရားခံကို အဆိုပါအမှုနှင့်စပ် လျဉ်း၍ ဒဏ်ငွေ ကျပ်ငါးထောင် ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်လိုက် ခြင်းဖြစ် သည်။၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲမတိုင်မီ မင်္ဂလာတောင် ညွန့်မြို့နယ် တွင်း၌ အကြိုမဲဆွယ် စည်းရုံး မှုများလုပ်နေစဉ် ယခုအပြစ် ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရသူ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ မြို့နယ်အတွင်းရေးမှူးက မင်္ဂလာတော င်ညွန့်ရထားဝင်းတွင် နေသူဒေါ် သန်းသန်းဌေးအား၎င်းတို့ ပါတီကို မဲထည့်ပါက ငွေထုတ်ချေး ပေးနေ သည်ကို ထပ်တိုးပေးမည် ဆိုသည့်အေ ကြာင်းနှင့် ဒေါ်သန်း သန်းဌေး၏သားက NLD ပါတီဝင် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း မဲဆွယ်မှုနောက် လိုက်ခဲ့သည့်အတွက်လည်း လက်ရှိ နေထိုင်နေသော လိုင်းခန်းပျောက် သွားမည်၊ ရခိုင်ကို ပြောင်းပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးစုံ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့်ဥပဒေနှင့်အညီ ဒေါ်သန်း သန်းဌေး က တရားစွဲ ဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရားလိုပြ သက်သေ ဒေါ်စန်း စန်းထူးက ”သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ပြစ်မှုကို ရုံးတော်က ချမှတ်လိုက်တာ ပဲ။ မျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကို လည်း ကြိုဆို တယ်။ ဒါက တရားမျှ တမှုပဲ”ဟု ပြောသည်။တရားလိုက မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်တရားရုံးသို့ ၂ဝ၁၂ ဧပြီလထဲ တွင်ပင် ဦးတိုက်လျှောက်ထား ခဲ့ပြီး ရုံးတော်က အမှုကို ၂ဝ၁၃ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။တရားလိုပြသက်သေ ဒေါ်စန်း စန်းထူးက ၄င်းတို့အနြေ ဖင့် နိုင်ငံ သား များရသင့်ရထိုက်သော အခွင့် အရေးအရ မတရားမှုအပေါ် မခံချင် ၍ တရားလို ဒေါ်သန်းသန်းဌေးက ရုံးတော်တွင် တရားစွဲဆို လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယား စစ်ဖြစ်ရန် တာစူနေသော်လည်း မြန်မာလုပ် သားများ ပြန်ခေါ်၊ မခေါ် အဖြေမပေါ်သေး
တောင်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ တင်းမာမှုများဖြစ်နေသော် လည်း မြန်မာလုပ်သားများအား ပြန်ခေါ် ရန် အကြောင်းကြားမှု မရှိ သေးေ ကြာင်း အစိုးရ ပြည်ပအလုပ် အကိုင်အေဂျင်စီမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့် က ပြောသည်။
”သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက ကျွန်တော် တို့လုံခြုံရေး တာဝန်မယူတော့ပါဘူး ဆိုရင် ပြန်ခေါ်မှာပေါ့။ အခုတော့ ဘာမှ မကြားသေး ပါဘူး”ဟု ဦးဝင်းမြင့် က ဧပြီလ ၈ ရက်တွင် ပြောသည်။လက်ရှိတွင် အလုပ်သမားများ ကို ကိုရီးယားသို့ဆက်လက်ပို့ဆောင် နေပြီး၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်နေ့ များတွင် အလုပ်သမား ၅ဝ ဦးခန့် စီ ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် မတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှစ၍ အမေရိ ကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ခြိမ်းခြောက်ပြော ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် တင်း မာမှုများတိုးလာခဲ့သည်။ တောင် ကိုရီး ယားနိုင်ငံ တွင်EPS စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်သော မြန်မာအလုပ်သမား ၇ဝဝဝ ခန့်ရှိသောကြောင့် အလုပ် သမား များ၏ မိသားစုများက စိတ်ပူ ကာ မေြး မန်းစုံစမ်းမှုများရှိကြောင်း လည်း ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။ ”ကိုရီးယား လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနက အရာရှိက တော့ ဒီလိုမျိုးတင်း မာမှုက ဖြစ်နေ ကျပဲမို့ စိုး ရိမ်စရာ မရှိပါဘူး ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ဒီကလူတွေကတော့ စိုးရိမ် တာပေါ့” ဟုဦးဝင်းမြင့် ကပြောသည်။
တောင်ကိုရီးယား တွင် အလုပ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာ အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ မိသားစုဝင် တစ်ဦး ကလည်း လက်ရှိတွင် အခြေ အနေတည်ငြိမ် လျက် ရှိပြီး ထူးခြား ချက်မရှိသေးဘဲ ပုံမှန်အလုပ်ဆင်း လျက်ပင် ရှိကြောင်း ပြောသည်။ကိုရီးယားသို့ အလုပ်သမားပို့ ဆောင်မှုကို သင်္ကြန်တွင်းရပ် နားထား မည်ဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်အပြီးတွင်မူ အလုပ် သမားများကို ဆက်လက်ပို့ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားတွင် မြန်မာ အလုပ်သမား တစ်သောင်းကျော်နှင့် ကျောင်းသား နှစ်ရာကျော်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား သားနှင့် လက်ထပ်ထား သော အမျိုးသမီးပါ ပေါင်းလျှင် တစ် သောင်းကျော်ရှိသောကြောင့် တောင် ကိုရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်တို့ ဆွေးနွေး ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သားများ၏ အကျိုးကို ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဟု သံရုံးဒုတိယအတွင်းဝန်ဒေါ်သင်းသင်း မြတ်ပြောကြား ချက်ကို ပြည်ပ အခြေ စိုက် မြန်မာသတင်းအေဂျင်စီတစ်ခု တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, April 10, 2013, under ဟာသ | No comments
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလက ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီး သွားတဲ့ မှုခင်း တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာ ဖြစ်ရ တယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ် ပါတယ်။
တရားရုံး တစ်ရုံးက အမိန့် တစ်ခု ချစရာ ရှိနေပါ တယ်။ အမှုက ဒီလိုပါ။ ဂျာမနီမှ အလှမယ် တစ်ယောက် ကို လက်ထပ် ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၉ နှစ် အရွယ် Soupolos ဟာ သား သမီး လိုချင်ပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင်က အမြုံဖြစ်နေ လို့ ကလေး မရနိုင်ဘူး ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင် ကလည်း ကလေး လိုချင်၊ ဇနီးဖြစ် သူက လည်း ဝမ်းနည်းနေရတဲ့အတွက် မိန်းမရဲ့ လိုအင် ဆန္ဒကိုဖြည့် ဆည်းပေးဖို့ အိမ်ဘေးက သူငယ်ချင်း အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ကလေးအဖေ Frank Maus ကို အလုပ် အပ်ပါတယ်။
ယင်း အလုပ်ကတော့ သူ့မိန်းမ အလှမယ်လေးကို တစ်ပတ်သုံးကြိမ် အတူနေခွင့်ပေးတဲ့အပြင် ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ပေးရပါတယ်။
သား သမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ ကလေးအဖေ Frank Maus ရဲ့ မိန်းမကလည်း ဒီလို လုပ်တာကို မကြိုက်ပေမယ့် “ငါဒီ အလုပ်တွေ မလုပ်ချင်ပါဘူး မိန်းမရာ ပိုက်ဆံကြောင့်ပါ” လို့ဇနီးကို ချော့မော့ ထားသတဲ့။ ဒါနဲ့...စာချုပ် သက်တမ်း ၆ လ အတွင်း တပတ် သုံးကြိမ်နဲ့ မှန်မှန်ကြိုးစား လာလိုက်တာ ၇၂ ကြိမ်နဲ့ ၆ လသာ ပြည့်သွားတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ အလှမယ်လေး ကိုယ်ဝန် မရခဲ့ပါ။
ဒါနဲ့ ကလေးဖအေ Frank Maus ကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ သူလည်း အမြုံဖြစ်နေပါတယ်။ အလှမယ် ယောက်ျား က စိတ်ဆိုးပြီး တရားစွဲ ခဲ့ပါတယ်။ Frank Maus ကလည်း သူ "စွမ်းသလောက် ကြိုးစားမယ်လို့ ပဲပြောခဲ့တာ... ကလေးရစေ့ရမယ်လို့ အာမ မခံခဲ့ဘူး" ဆိုပြီး အေးအေးဆေးဆေး တရား ရင်ဆိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အားလုံးက အံ့အားသင့်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ မအံ့သြဘဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Frank Maus ရဲ့ ဇနီးသည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၁၄၄ မထုတ်ရန် ၀န်ကြီးချုပ်သို့ သံတွဲလူထု ကန့်ကွက်စာပို့
သံတွဲမြို့တွင် လက်ရှိအနေအထားအရ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ဆင့်ခြင်းမပြုရန် ဒေသခံပြည်သူလူထု ၅၀၀ ကျော် တို့်က လက်မှတ်ရေးထိုးလျက် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ထံသို့ ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၆ ရက်နေ့က နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျော့ပိုက်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ သံတွဲခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက် သံတွဲမြို့နယ်၌ ပုဒ်မ ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြထားသဖြင့် ပြည်သှုအများစုဆန္ဒနှင့်အညီ ယခုကဲ့သို့ ကန့်ကွက်စာပို့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူထုလက်မှတ်ကောက်ခံရေး ဆောင်ရွက်သူများက အာရ်ကန်တိုင်းမ်စ်ကို ပြောသည်။
" ကျနော်တို့သံတွဲမှာ ဆူပူအကြမ်းဖက်တာမျိုးတွေ မရှိဘူးဗျ။ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလည်း ခွင့်ပြုချက်နဲ့ အညီ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆောင်ရွက်ကြတာများတယ်။ သံတွဲမှာ မတူညီတဲ့လူမျိုးစုနှစ်စု အတူနေကြပေ မယ့် အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်။ ငပလီကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေလည်း အရင်က ထက်တောင်မှ လာရောက်လည်ပတ် နေကြတယ်။ ရေလုပ်ငန်းနဲ့ အခြား လုပ်ငန်းတွေ လည်း ဒီရာသီမှာ အဆင်ပြေကြတယ်။ ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ရမယ့် အနေအထားမျိုး လုံးဝမရှိဘူး။ မလို အပ်ဘဲ ၁၄၄ ထုတ်လိုက်ရင် ငပလီခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျရှုံးသွားမှာဖြစ်သလို ဒေသခံပြည် သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးဟာလည်း အကြီးအကျယ် ထိခိုက်သွားနိုင်တာမို့ ကျနော်တို့ ကန့်ကွက် နေရတာပါ။ " ဟု လူထုလက်မှတ် ကောက်ခံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့က ကောက်ယူရရှိခဲ့သော လက်မှတ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်သို့ ပေးပို့ ထားခဲ့ပြီး၊ သံတွဲတမြို့နယ်လုံး ကျေးလက်တောရွာများအထိ လူထုလက်မှတ်များကို ဆက် လက်ကောက် ခံ သွားမည်ဟုလည်း ၄င်းကဆိုသည်။ ကောလာဟလများကို အခြေခံကာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ရေး ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည့် သံတွဲမြို့မိမြို့ဖများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
အစည်းအဝေး၌ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ရေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူများနှင့် ပတ်သက်၍ " သံတွဲကိုညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ မြို့မိမြို့ဖ အမည်ခံလူတစုဟာ အမှန်တကယ် သံတွဲကို ကိုယ်စားပြု သူတွေမ ဟုတ်ကြဘူး။ ပြည်သူ လူထုဆန္ဒနဲ့အညီ ရွေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ ကောလာဟလသတင်းတွေကို နားယောင် ပြီးတော့ သံတွဲကို မငြိမ်မသက်ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်စေလိုသူတွေအလိုကျ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ခြင်း သာဖြစ်တယ်။ " ဟု သံတွဲမှ ဆရာတော်တပါးက အမိန့်ရှိသည်။
ရခိုင်လူမှုကွန်ယက်မှ ကိုမြင့်မိုးကလည်း " အမိန့်တခုကို ထုတ်ရတာလွယ်တယ်ဗျ။ အဲဒီအမိန့်ကိုပုံဖော် လုပ်ဆောင် ရမယ့် လူတွေနဲ့ လိုက်နာမယ့် လူတွေကိုလည်း ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ၁၄၄ ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် သွားချင် တိုင်း သွားလို့မရတော့ဘူး အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကို ထိခိုက်လာမယ်။ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေကိုလဲ ထိခိုက်လာ မယ်။ တဖက်မှာ ၀န်ထမ်းတွေလည်းမလိုအပ်ဘဲ အလုပ်များလာမယ်။ ဒီအမိန့်က ၂ လ တစ်ကြိမ် သုံးသပ်ရတာဆိုတော့ ထုတ်ပြီးမှ အဆင်မပြေဘူး၊ ပြန်ရုပ်ပေးဗျာ သွားလုပ်လို့မရဘူး။ အပြစ်မဲ့ပြည် သူတွေဟာ အနည်းဆုံး ၂ လတော့ အလိုလိုနေရင်း ဒုက္ခခံကြရတော့မှာပဲ။ " ဟု သုံးသပ်ပြော ဆိုသည်။
ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၈)ရက်နေ့က သံတွဲ၌ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ အောက် တိုဘာ (၁၀) ရက်နေ့တွင် တည်ငြိမ်နေသော အနေအထားနှင့်အတူ၊ ငပလီခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အများပြည် သူတို့၏ စားဝတ်နေရေး ကိုအလေးထားလျက် အာဏာပိုင်များက ပုဒ်မ ၁၄၄ အား ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း ပေးခဲ့သည်။
အမ်းတွင်ဖမ်းမိသောသင်္ကန်းဝတ်ဘင်္ဂလီ ၈ ဦးအားဖမ်းဆီးခြင်းပတ်သက်ပြီး သတင်းများမှ အဆက်
(၁) အာဆင်နာမောက်(ခ)ရွှေလှမောင်၊ ၁၇ -နှစ်၊(ဘ) ဟော်ဆီရာမောက်၊အလယ်ကျွန်းရွာ။
(၂)မာမောက်ဒူ(ဘ) အာမာဂူတော်ချော၊၁၈-နှစ်၊ အလယ်ကျွန်းရွာ၊။
(၃)ဇေယာဘူလဟောက်(ဘ)ဦးဘာဒူ၊ ၁၈ နှစ်၊ ခေါင်းတုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပလောင်ရွာ။
(၄) ဇာဟတ်တူဆောင်း(ခ)လှမောင်၊ ၁၇-နှစ်၊(ဘ)အာဘီဒူလာ၊ အလယ်ကျွန်း ကျေးရွာ။
(၅) မာမတ်ဂျူဒီ(ခ)ကျော်ဘ၊ ၁၈ နှစ်၊(ဘ)မာမတ်ဂျောဘီ၊ ခေါင်းတုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပလောင်ရွာ၊
(၆)နာဂူဆောင်(ခ)မောင်မောင်လှ၊ ၁၈ နှစ်၊(ဘ) အဒူမာမောက်၊စံကားတောင်ရွာ။
(၇)ရိုလာမီ(ခ) ကျော်စိုး(ဘ)အဒူတောမာ၊ ၁၈-နှစ်၊အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ။
(၈)ဇေယာဘူလ်ဟောက်(ခ)မောင်မောင်အေး၊ ၁၈ -နှစ်၊ (ဘ)အာဇီဇူလ်ဟောက်၊ ခေါင်းတုတ်ကျေး ရွာအုပ် စု၊ ပလောင် ရွာ တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီ များကို ခေါ်ဆောင်လာသူမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ အင်းအေရွာ ၊ ဇမ္ဗူအေးကျောင်း တိုက် မှ ဦး ကော သိယ၊ သာသနာဝင်အမှတ် ၁၀/ကထန(သ)၀၀၂၇၃၆ ဖြစ်ပြီး ဒရိုက် ဘာမှာ အက် ခူနောင်၊ ၂၄ နှစ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၀/ကထန (နိုင်)၀၁၈၈၂၂ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဘုန်းကြီးသည် ယခင်နှစ်များက ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဘင်္ဂလီများကို ရန်ကုန်သို့ ကားဖြင့်ပို့ဆောင်ပေး ခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ ယခုနှစ်တွင်းလည်း ပထမတစ်ခေါက် သယ်ယူစဉ်က အပေါက်ဝကကျေးရွာမှ ဘင်္ဂလီ(၈)ဦး ၊ ဒုတိယ တစ်ခေါက်တွင်လည်း ပေါက်အ၀ကျေးရွာမှာ ၈ ဦးနှင့် ယခုတစ်ကြိမ် တွင် အဖမ်း ခံရခြင်းဖြစ် သည်ဟု သိရ ပါသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါဘုန်းကြီးအား လူဝတ်လှဲပြီး စစ်တွေမြို့အမှတ်(၁) ရဲစခန်းတွင် ထားရှိကြောင်းနှင့် လိုအပ်သည် များကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုသိရှိရပါသည်။
စစ်တွေ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်သူ ၂ ဦး ကို ရုံးတင် တရားစွဲပြီ
စစ်တွေမြို့တွင် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မတ်လ ၇ ရက်နေ့က စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြသူများ အထဲမှ ဦးဆောင်သူ (၂) ဦးကို ယမန်နေ့က ရုံးတင် တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီဟု သိရသည်။
Sittwe-protestတရားစွဲခံရသူ နှစ်ဦးမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးကွန်ယက် ဥက္ကဌ ဒေါ်မညိုအေးနှင့် ရခိုင်လူ မှု ကွန်ယက်မှ ဦး ကျော်ဇောဦးတို့ ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ နှစ်ဦးကို စီတန်း လှည့်လည်မှု ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၈ နှင့် အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှူး မိုးကျော် မှ တရားလို လုပ်ပြီး စစ်တွေ မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ယမန် နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရုံးတင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည် ဟု ဒေါ်မညိုအေးက ပြောသည်။
“ကျမတို့က စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်တာမရှိဘူး။ နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားတဲ့ ဒို့ တာဝန် အရေးသုံးပါးကိုလည်း ထိခိုက်ခဲ့တာမရှိ။ ကျမတို့ လျှောက်လွှာကို မြို့နယ်သာမက ပြည်နယ် အဆင့် ကိုလည်း တင်ခဲ့ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မပေးတာ ကျမတို့ အပြစ်လား၊ သူတို့အပြစ်လားဆိုတာ အားလုံး သိကြ မှာပါ။ ကျမတို့က ပြည်သူလူထု အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကျမတို့ ဦးစီး ဦးဆောင် လုပ်တာ သာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ လျှောက်လဲချက်တင်ဖို့ အစီအစဉ်လုပ်နေပါတယ်” ဟု ဆို သည်။
ဆန္ဒပြခွင့်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က မြို့နယ်အဆင့်တွင် တင်ပြခဲ့သော်လည်း ပါယ်ချ လိုက်သည့် အ တွက်မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်အဆင့်သို့ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အဆင့်သို့ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ပြီးနောက် ပြည်နယ်အဆင့် အာဏာပိုင်က မြို့မိမြို့ဘများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှ ခေါင်းဆောင်တချို့အပါအ၀င် ခွင့်ပြုမိန့်တင်သူ ဒေါ်ညိုအေးတို့ကို ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
social-activists-Daw-Ma-Nyo-Ayeခွင့်ပြုမပြုကို ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ဆုံးချက်အပေါ် မူတည်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်း မပြန်သဖြင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မတ်လ ၇ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့လမ်းမများပေါ် တွင် မြို့သူမြို့သားများက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲတွင် ရဟန်းတော်များ အပါအ၀င် ထောင်နှင့်ချီသည့် မြို့လူက ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်များ အတွက် တူကရကီအစိုးရ အကူအညီဖြင့် နေအိမ် ၅၀၀၀ နီး ပါး ဆောက်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံသား ဟုတ် မ ဟုတ် စိစစ်ပြီးမှ နေရာ ချပေးရန် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းပြင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ဒေသခံ တိုင်း ရင်းသားများ ဆန္ဒကိုလေးစားပါ၊ ဒေသခံများ ဆန္ဒမပါဘဲ ဒေသအရေးမဆုံးဖြတ်ပါနှင့် စသည့် အချက် များကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်မညိုအေးနှင့် ဦးကျော်ဇောဦးတို့ နှစ်ဦးကို လာမည့် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် နောက်ထပ် ရုံးချိန်းပေး ထား ကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့က ကျမတို့ အာမခံငွေတော့ မပေးခဲ့ရဘူး။ အာမခံအတွက် လူ ၃ ဦး လိုပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ဦးမှာ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်မှု ကျပ် ၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိရမယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က ကျမတို့ကို အမြဲတမ်းအာမ ခံထား ရမယ် ဆိုဒါတွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်မညိုအေးက ဆက်ပြောသည်။
အလားတူ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ရသေ့တောင်မြို့ပြပွဲတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ကိုတိုးတိုး၊ဦးသန်းဌေးနှင့် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်များအား အိမ်ဆောက်ပေးမည့်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်သည့် တောင် ကုတ် ဆန္ဒပြပွဲ ဦးဆောင်သူ စိုးဝင်း အပါအ၀င် ၃ ဦးကိုလည်း အာဏာပိုင်များ မှ တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရ သည်။
နိုင်ငံသား မစိစစ်ဘဲ ဘင်္ဂလီများပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများအား ရုံးတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိ
လွန်ခဲ့သည့် မတ်လမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားမစီစစ်ဘဲ ဘင်္ဂလီများပြန် လည်နေရာ ချထားခြင်း ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူ ခေါင်းဆောင်(၁၁)ဦးအား ရုံးတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရခိုင်လူမှုကွန်ယက် တာဝန် ရှိသူ များက ဆိုသည်။
၄င်းတို့အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဆင့်ဆင့်သော အာဏာပိုင်များသို့ ခွင့်ပြုချက် တင် ခဲ့သော် လည်း ပယ်ချခံခဲ့ရ၍ နောက်ဆုံးတွင်ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆန္ဒပြရာမှ ယခုကဲ့သို့ အရေးယူ ခံနေ ရခြင်း ဖြစ် သည်။
နိုင်ငံသား မစိစစ်ဘဲ ဘင်္ဂလီများပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို စစ်တွေမြို့သူမြို့သားများ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေကြ စဉ်
တောင်ကုတ်မှ ဦးမင်းထွန်း၊ ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးသန်းလွင်စိုး၊ ရသေ့တောင်မှ ဦးတိုးတိုး၊ ဦးသန်းဌေး၊ စစ်တွေမှ ဦးကျော်ဇောဦး၊ ဒေါ်ညိုအေးနှင့် ကျောက်တော်မှ ဦးမောင်သိန်းလှိုင်၊ ဦးမောင်ဝင်း၊ ဒေါ်လှမေ၊ ဒေါ်တင် တင်အေး တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈)ဖြင့် ရုံး တင်စစ်ဆေးခံနေရကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကုတ်မှ တရားစွဲခံထားရသူများကို ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့မှ မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးတင် စစ်ဆေး ခဲ့ကြောင်း တရား စွဲခံ ထားရသူ ဦးစိုးဝင်းက အာရ်ကန်တိုင်းမ်စ် ကိုပြောသည်။
" ကျနော်တို့ ၃ ယောက်ကို ဒီနေ့ တရားရုံးကခေါ်တယ်။ တရားလိုက ရဲမြို့နယ်မှူးဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုပဲ အဓိ ကမေး တယ်။ ကျနော်တို့ကိုတော့ ထူးထူးခြားခြား မစစ်သေးဘူး။ သက်သေတွေလည်း မစစ်သေးဘူး။ လာ မယ့် ဧပြီ ၂၅ ရက်မှာ ရုံးချိန်း ရှိတယ်။ " ဟု ဆိုသည်။
ထို့အတူ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ ဦးတိုးတိုးနှင့် ဦးသန်းဌေးတို့အား ဧပြီ ၈ ရက်နေ့တွင် ရုံးတင် စစ်ဆေး ခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင် လူမှုကွန်ယက်က ဆိုသည်။
စစ်တွေမှ ဦးကျော်ဇောဦးနှင့် ဒေါ်ညိုအေးတို့နှစ်ဦးအား ဧပြီ ၉ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံး၌ စွဲချက်တင် ခဲ့ကြောင်း တရားစွဲခံနေရသူ စစ်တွေလူမှုကွန်ယက်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ညိုအေးက ပြောသည်။
" ဒီနေ့ ကျမနဲ့ ဦးကျော်ဇောဦးကို ရုံးတင်တရားစွဲဆိုတယ်။ တရားလိုကတော့ စစ်တွေပြို့အမှတ်(၁)ရဲစခန်းက စခန်းမှူး ဦးမိုးကျော်ဖြစ်တယ်။ လိုပြသက်သေ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးလည်းပါတယ်။ ကျမတို့ကို တရား စွဲနိုင်ဖို့ သက်သေ အထောက် အထားတွေပြ တယ်။ ကျမတို့ တယောက်စီအတွက် ၅ သိန်းတန်ခံဝန်နဲ့ လူသုံးယောက် က အာမခံပေးရတယ်။ ဧပြီ ၂၃ မှာ ထပ်ပြီးတော့ ရုံးချိန်းထားတယ်။ " ဟု ဆိုသည်။
၄င်းတို့မှာ နိုင်ငံသားစီစစ်မှုမရှိဘဲ ဒုက္ခသည်များပြန်လည်နေရာချထားခြင်းအား ကန့်ကွက်သည့် ဆန္ဒပြ မှုများ ကို ဦးဆောင်ကာ မတ်လ အတွင်း၌ စစ်တွေ၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ ရသေ့တောင်၊ တောင် ကုတ်၊သံတွဲ မြို့နယ်များတွင် ပြုလုပ် ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
နာရေး ကူညီမှု အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော် သူက ငပလီ ကမ်းခြေမှ ၄င်း ပိုင်မြေ များအား တပ်မြေ အဖြစ် သိမ်း ခဲ့သော်လည်း ဟိုတယ် များအတွက် ငှား ရမ်းထား၍ ပြန်လည် ရရှိရန် တင်ပြသွား မည်ဟု ပြောဆို လိုက် သည်။
သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီကမ်းခြေ (ဇီးဖြူ ကုန်းကျေးရွာ)မှ ဦးကျော်သူပိုင်မြေအပါအ ဝင် ဒေသခံများ၏ မြေ ၃၅ ဒသမ ၅၃ ဧက ကို အမှတ်(၅၅) ခြေလျင် တပ်ရင်းမှ တပ်မြေ တိုးချဲ့ရန် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်က သိမ်း ဆည်းခဲ့ ကြောင်း၊ သို့သော် အဆိုပါမြေများတွင် တပ်မြေအဖြစ် တိုးချဲ့မှုမပြုဘဲ ဟိုတယ်များ သို့ ငှား ထားသောကြောင့် ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်သို့ တင်ပြသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော် သူက ပြောသည်။
အဆိုပါကျေးရွာတွင် အုန်းခြံလုပ်ငန်း၊ ဘန်ဂလိုအငှားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝဝ ပြည့် နှစ်ဇူလိုင် ၂၅ ရက်တွင် သိမ်း ဆည်းကြောင်းထုတ်ြ ပန်ခဲ့ကာ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် ဖယ်ပေးခဲ့ရကြောင်း၊ အစားထိုးမြေ အဖြစ် ဇီးဖြူကုန်းရွာအနောက်ဘက် လယ်ကွင်းများတွင် ပေ ၄ဝ x ၆ဝ ကွက်ပြန်ေ ပး သော်လည်း မယူ ခဲ့ကြောင်း မြေ ၆ ဧကသိမ်း ဆည်းခံရသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်လှလှမြင့်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါမြေများ၌ ဟိုတယ် များဆောက်လုပ်ထားပြီး အချို့ ဟိုတယ်စီမံ ကိန်းများလည်း စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေ သခံတစ်ဦးဖြစ် သည့် ဒေါ်ခင်ခင်ဆုကလည်း ပြောသည်။ ”ကျွန်တော် တို့က အောင်ချမ်း သာဘန်ဂ လိုဆိုပြီးလုပ်ထားတာ။ အဲဒီနေရာမှာ ခုတော့ Amazing Hotel
ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ အရင် တုန်းကတော့ ပြောခွင့်မသာလို့ မပြောခဲ့ကြ ဘူး။ အခုတော့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို တင် ပြီးဆက် လုပ်သွားမယ်” ဟု
ဦးကျော် သူက ပြောသည်။သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် နှစ်မှစ၍ ကမ်းခြေမှ သဲများ ကျောက်များကို အာဏာပိုင် များက ထုတ်ယူရောင်းစားခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါနေ ရာတစ်ဝိုက်တွင် ရေတိုက်စားမှုကြောင့် အုန်း ပင်များ လဲ ကာ ကမ်းခြေပျက်စီးနေပြီဟု ဒေသ ခံတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဝင်းလွင်က ပြော သည်။”မိရိုးဖလာ အစဉ် အဆက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဘန်ဂလိုလုပ်ငန်း အုန်းခြံလုပ်ငန်းတွေကဖယ် ပေးခဲ့ရတော့ မိသားစုတွေ အားလုံး ဒုက္ခရောက် ခဲ့ကြ တယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင်က အမြန်ဆုံးစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါ တယ်”ဟု ဒေါ်လှလှမြင့်က ပြောသည်။
အဆိုပါမြေများတွင် လက်ရှိ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေသည့် Max ကုမ္ပဏီများအုပ်စုသို့ ဆက် သွယ်မေးမြန်း ရာ ၄င်းတို့သို့ တပ် မတော်က အငှားချထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့်ငါး နှစ်ခန့်မှစ၍အ ငှားချ ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခပေးသွင်းရကြောင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဖြေ ကြားသည်။အဆိုပါ ၃၅ ဒသမ ၅၃ ဧကတွင် အိမ် ထောင်စု ၅၇ စုရှိပြီး အိမ်ခြေ၊ ဘန်ဂလို အပါအဝင် ၁ဝဝ ကျော် ဖျက်ပေး ခဲ့ရကြောင်း၊ လူဦးရေ ၂ဝဝ ကျော်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေ သခံများထံမှ သိရသည်။
သင်္ကန်း ၀တ်ထားသော ဘင်္ဂလီ ၈ ဦးနှင့်အတူ လိုက်ပါပို့ဆောင်သည့် ဘုန်းကြီး တစ်ပါးအား ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့အထွက် ၊ ပဲပဒုံ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၃၅ ခန့်အချိန်တွင် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီ ၈ ဦးမှာ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာနှင့် ခေါင်းတုတ် ကျေးရွာများမှ ဘင်္ဂလီများ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား ကားဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးသည့် ဘုန်းကြီးမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ အင်းအေရွာ၊ ဇမ္ဗူအေးကျောင်းတိုက်မှ ဦး ကောသိယ၊ သာသနာဝင် အမှတ် ၁၀/ကထန(သ)002736 ဖြစ်ပြီး ဒရိုက်ဘာမှာ အက်ခူနောင်၊ ၂၄ နှစ်၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား အမှတ် ၁၀/ကထန(နိုင်) 018822 ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့အား ၉၆၉ စတေကာ ကပ်ထားသည့် CRW ကား အမျိုး အစား ၅ဃ/၆၃၈၈ ဖြင့် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျောက်တော်မြို့မှ စတင် ခေါ်ဆောင်လားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကို ရီးယားနိုင်ငံနဲ့ စစ်မက် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ရှိတဲ့ အတွက် ရှောင်ရှားနိုင် ဖို့ နိုင်ငံခြား သားတွေ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာကြ ဖို့ မြောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံက နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ဘေးကင်း လုံခြုံစိတ်ချဖို့အတွက် ဆိုးလ်မြို့နဲ့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကနေ ပြောင်းရွှေ့ ကြဖို့ မြောက် ကိုရီး ယား အစိုးရရဲ့ အာရှ ပစိဖိတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီရဲ့ အင်္ဂါနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အစိုးရပိုင် သတင်းအေဂျင် စီ က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲတုန်းကလည်း ပြုံယမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေကိုလည်း အလားတူ သ တိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီအတောအတွင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်က တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ၂ နိုင်ငံ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Kaesong စက်မှုဇုန်ရဲ့ လည်ပတ်မှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ထားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် စက်မှုဇုန်မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားတွေဟာ အင်္ဂါနေ့မှာ အလုပ်မဆင်းကြတော့ပါဘူး။
ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ နောက်ဆုံး အဆက် အသွယ် ကို ဖြတ်တောက် ပစ်လိုက် တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
မြောက် ကိုရီးယား အစိုးရက တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Kaesong စက်မှုဇုန်ကနေ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံသား အလုပ်သမား ၅ သောင်းကျော်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ အပြု အမူကြောင့် မြောက် ကိုရီးယား နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အယုံကြည် မရှိတော့တဲ့ အခြေစိုက် သွားလိမ့် မယ်လို့ တောင်ကို ရီးယား သမ္မတ ဘတ်ဂွန်ဟဲး (Park Geun-hye) က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာကြဖို့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက သတိပေးချက် ထွက်ပေါ်ပြီး တဲ့နောက် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဒေသမှာ အခြေအနေတွေ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်တာမမြင်လိုဘူးလို့ တရုတ် အစိုးရက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်ဘက် ကဖြစ်ဖြစ် အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးလာအောင် လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို တရုတ်နိုင်ငံက ဆန့်ကျင် တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ဟောင်လီ (Hong Lei) က သတင်းထောက်တွေ ကို ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ ၀တ်စုံများ ၀တ်လျင် အခက်အခဲ ဖြစ်စေသည်ဟု ပြောသည့် နိုင်ငံခြားရောက် သမီးဆိုး
Posted by drmyochit Wednesday, April 10, 2013, under သောက်တလွဲလုပ်ရပ်များ | No comments
စစ်ကြီး ။ ။ မင်္ဂလာပါ မီးဇိုး ။
မီးဇိုး ။ ။ အိုးးးးရားး မင်္ဂလာပါနော် ကို $30
စစ်ကြီး။ ။ မီးဇိုးက နိုင်ငံခြားမှာ နေတာပါနော် ။ ဟုတ်တယ်မှလား ၁ မီး
မီးဇိုး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ရှဉ့်စ် . မီးက နိုင်ခံဂျားစ်မှာနေတာပါရှဥ့်စ် ...........
စစ်ကြီး။ ။ ၁ မီးလေးက နိုင်ခံဂျားကို ဘယ်လိုမြင်လဲပေ့ါနော် ။ ၁ မီးအမြင်လေး ဦးကိုပြောပြနိုင်မလား ။
မီးဇိုး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ ရပါတယ်ရှဥ့်စ် ။ မီးကတော့ နိုင်ခံဂျားကို မြတ်နိုးတယ်ပေ့ါနော် ။ အရမ်းပွင့်လင်းတော့ နှစ်သက်မိတာပေ့ါ ရှဥ့်စ် ။ မီးက အင်္ဂလိုးးးးးးးလိုပြောရတာလည်းနှစ်သက်မိတယ်လေ ဒ့ါကြောင့်လည်း စာရေးရှင်တောင် အင်္ဂလိုးးးးးးးလေးထည့်ရေးပါတယ် ရှဥ့်စ် ။
စစ်ကြီး ။ ။ မီးဇိုးရေ နည်းနည်းလောက် နောက်ဆုက်ပြောရင်ကောင်းမယ်ထင် ။ ကျွန်တော် မျက်နှာသစ်ပြီးပြီဗျ ။
မီးဇိုး ။ ။အိုးးးးးးးးးးးးးးး ဂေါက် ။ဆို့ဆော်ရီးးးးးးးးးးနော် ။
စစ်ကြီး ။ ။ရားးးပါတယ်ဗျာ ။
စစ်ကြီး ။ ။ဒါနဲ့ မီးဇိုးက ဂျစ်ဂျစ်ကို အိမ်ခေါ်ပြီး အိပ်မယ်လို့ပြောတယ်နော် ။ ဟော်တယ်မသွားဘူး ။ ကိုယ့်အိမ်မှာဆို လွတ်လပ်တယ် ဘာမှလည်း ကြောက်စရာမလိုဘူး ။ စကျူရတီ ကောင်းပြီး ၊ ဟိုက်ဒန်ကင်မရာလည်း မကြောက်ရဘူးလို့ပြောသွားတယ်နော် ။ ဟုတ်ပါသလား မီးဇိုး
မီးဇိုး ။ ။အိုးးးးးးးးးးးးးးးးး သေချာလည်းပြန်ဖက်ပါဦး ။မီးဇိုးပြောတဲ့အထဲမှာ ဘယ်ယောင်္ကျားနဲ့ အိပ်ပါတယ် မအိပ်ပါဘူး မပါပါဘူး ဂျစ်ဂျစ်ကို ခြံထဲခေါ်လိုက်တာ လို့ပဲပါတာ ။သိပ်ဆိုးကြတာပဲကွယ် .. သမီုးဇီးကလည်း .. အဲလို ဗိုလ်ဆိုးဆိုးလေးတွေကို ပိုပိုချစ်ချစ်လာတယ် ..
စစ်ကြီး။ ။ သြော် .. မီးဇိုး ဂျစ်ဂျစ်က ဥပုဒ်စောင့်တဲ့ ကျားပေ့ါနော် ။ သွားမပါဘူးထင်ပါရဲ့
မီးဇိုး ။ ။ အဟိ အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေ့ါ ဥစစ်ရယ် ။
စစ်ကြီး။ ။ အောင်မငီး .. နာမည်ကောင်းကောင်းခေါ်ပါဗျာ ။ ကျောချမ်းတယ် :O :'(
စစ်ကြီး။ ။ မီးဇိုးက ဝေါမှာ ဒါလေးတွေ့လိုက်ရတယ်
မဝယ်ဘဲ နှိုက်မြည်းပြီး ထွက်သွားလို့ ရတာ ..
ကျိုက်ထီးရိုးက ယိုစုံဆိုင်တွေနဲ့ မန္တလေး ဘူတာကြီးအရှေ့က ထိုးမုန့်ဆိုင်တွေပဲ ရှိတယ် ။။
ဘယ်မိန်းမကိုမှ နှိုက်မြည်းပြီး မယူဘဲ ထွက်သွားလို့ မရဘူးဆိုတာ ယောကျာ်းတွေ သိသလား ... ? ? ?
If you touch it , taste it , break it , you have to buy it .
This is called woman !!!
( သမီးဆိုး )
အဲ့အတွက် မီးဇိုးမှာ ခံစားချက်လေးများရှိမလား ။ ဒါမှ မဟုတ် မီးဇိုးလေး ခဏခဏ အမြည်းခံရဖူးလို့များလား ။
မီးဇိုး ။ ။ အဲ့အတွက် မီးဇိုးက ပြောစရာမရှိပါဘူးရှဥ့် ။ မီးဇိုးက အပေးအကန်းရှက်ရောတယ်လေ အဟီ ။
စစ်ကြီး ။ ။ ဟမ် ............
စစ်ကြီး။ ။ ကဲပါထားပါတော့ ..... ။ မီးဇိုးအနေနဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးဝတ်စုံပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ ခင်ဗျ ။
မီးဇိုး ။ ။ မီးဇိုးအနေနဲ့တော့ မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံနဲ့ မီးနဲ့က Allergic ပါရှဥ့်စ် ။မီးအဲ့ဒါတွေ ၀တ်ရင် မနေတက်ဘူးရှဥ့်စ် ။
စစ်ကြီး။ ။ သြော် ..... ဒါဆို မီးဇိုးက နိုင်ငံခြားဝတ်စုံတွေနဲ့မှ ကိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ။
မီးဇိုး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှဥ့်စ် ။ အထူးသဖြင့် ဘစ်ကနီနဲ့ဆို မီးဇိုးအတွက် သိပ်နေလို့ကောင်းပါတယ်ရှဉ်စ် ။ဖြစ်နိုင်ရင် ဘာမှ မ၀တ်လေ ပိုနေတက်လေပါရှဥ့်စ် .။
စစ်ကြီး ။ ။ ငိ ..............
စစ်ကြီး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ညာာာာာာာာာ ။ ခုလိုဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူး ၆ရမ်းတင်သလို ခု စစ်ကြီးလည်း ၆ ရမ်းကျောချမ်းနေပါဘီဂျာ ။ ခွင့်ပြုပါဦးနော် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
၀ှစ် .......... စစ်ကြီးပြေးသံ :P
သူနဲ့ အမေးအဖြေလုပ်လို့ ဒီစာရိုက်လို့ မောတာမဟုတ်ဘူး ။
ရင်မောနေတာ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများအတွက် ဒီလို မိန်းကလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ .............
လူ ၃၀၀ ကျော်ကို ဆေးထိုးသတ်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည့် ဆရာဝန်အား အရေးယူရန် စီစဉ်
ဘရာဇီးလ် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် လူပေါင်း (၃၀၀)ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် ဆရာဝန် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ၏ ပြစ်ချက်ဟောင်း များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘရာဆီးလီးယား မြို့တော် ရှိ ဆရာဝန် တစ်ဦးသည် ဆေးရုံကုတင်များ အားလပ်စေလိုသဖြင့် လူ(၇)ဦးကို သတ်ဖြတ် ခဲ့ကြောင်း စွဲချက်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆေးရုံတွင် ကုတင်နေရာ လစ်လပ်စေရန်ဆိုသော စိတ်ဖြင့် လူပေါင်း (၃၀၀)မျှကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဟု ယူဆရကြောင်း နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ထောက်လှမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဗာဂျီနီယာ ဆိုရက်စ်ဒီ ဆိုဇာနှင့် သူမ၏ ဆေးအဖွဲ့သည် လူနာများကို ကြွက်သားလျော့ ရဲစေ သည့် ဆေး ဝါးများ ထိုးသွင်းပြီးနောက် အောက်စီဂျင် ဖြည့်သွင်းမှုကို လျှော့ချပစ်ကာ သေစေခဲ့ကြောင်း အစိုး ရ ရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။ အသက်(၅၄)နှစ်ရှိ ဒေါက်တာ ဒီဆိုဇာသည် ကူရီတီဘာ တောင်ပိုင်းရှိ Evangelical ဆေးရုံတွင် လူသတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့်နောက် ယခုအခါ စွဲချက်တင် ခံထား ရပြီ ဖြစ်သည်။
သူမလက်အောက်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် သူနာပြု (၃)ဦး၊ ဆရာဝန်(၃)ဦးနှင့် ရူပကုထုံး ပညာရှင် (၁) ဦးတို့ သည် လည်း လူသတ်မှုတွင် ပါဝင်ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များနှင့် အသီးသီး ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒီဆိုဇာသည် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် ပြောဆိုမှု တစ်ခုတွင် ဆေးရုံကုတင်များကို ရှင်းလင်းကာ နောက်ထပ် လူနာများ ကို နေရာပေး လိုသဖြင့် နာတာရှည် လူမမာများကို ပစ်မှတ်ထားကာ ယခုလို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခင်းဟု အစိုးရ ရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်မကတော့ စိုးရိမ်စရာ အနေအထားနဲ့ စောင့်ကြည့်ရတဲ့ လူနာတွေကို ရှင်းပစ်ချင်တယ်။ ဒါက ကျွန်မကို မရိုးမရွ ဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းတာက ကျွန်မရဲ့ Missionက နောက်ဘဝကို နီးနီးစပ်စပ် တွန်း ပို့ပေးဖို့ ဖြစ်နေတာပါပဲ"ဟု ဒီဆိုဇာ ဖုန်းဖြင့်ပြောထားသည့် အသံကို အစိုးရ ရှေ့နေများက မီဒီယာ များထံ ပေးအပ် ခဲ့သည်။ ဒီဆိုဇာကမူ စွပ်စွဲမှုများကို ငြင်းဆိုထားပြီး သတင်းထောက် များနှင့် ခေတ္တ မျှ တွေ့ ဆုံ ခွင့် ရချိန်တွင် "တရားမျှတမှုကို ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ အချိန်တစ်ခု ယူပြီးရင် အမှန် တရား က ပေါ်ထွက် လာမှာ ပဲ"ဟု ပြောကြားသွားသည်။
ဒီဆိုဇာ၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ အီးလီယက်စ် မတ်တာအာဆာ့ဒ်ကမူ ၎င်း၏ အမှုသည်တွင် အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေ ထူပြမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ ယခုအခါ ရဲများသည် အထူးကြပ်မတ်ကုသမှု ဌာနကို ဒီဆိုဇာ စတင် တာဝန်ယူခဲ့သည့် အချိန်မှစကာ (၇)နှစ်အတွင်း ယင်းဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့သူ (၁၇၀၀)တို့၏ မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ပုန်းထွန်ချောင်းမှာ အရက်မူးပြီး ဒိုင်ဗင်ထိုးချမှုကြောင့် နဖူးကွဲကာ လူတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံး
ဧပြီလ(၈)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီခန့်က တာချီလိတ်မြို့မှာ သင်္ကြန် ကာလ အတွင်း ရေက စားနေကြ နေ ရာဖြစ်တဲ့ ပုန်းထွန်ချောင်းမှာ လူတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးကြောင်း သိရပါတယ်။
သေဆုံးသူသည် အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် မျိုးကျော်သူ(ခ)ရာဇာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ၎င်းအနေဖြင့် အရက် မူးကာ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှ ရေထဲသို့ ဒိုင်ဗင်ထိုးအချ ရေထဲမှ ကျောက်တုံးနှင့် နဖူးသွားရိုက်မိပြီး နဖူးကွဲ သွားကာ ရေထဲမှာပဲ သတိ လစ်ပြီး ရေစီးကြောင်း အတိုင်း မျှောပါရင်း ရေမွမ်းသေ ဆုံးသွား ဟန် ရှိကြောင်း ချောင်း အတွင်းရေထဲမှာ နဖူးကွဲသွားပြီး သတိလစ်သွားကာ ရေစီးကြောင်းအတိုင်း ပါသွား ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ချောင်းအတွင်းရှိလုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများက ရေထဲသို့ ဆင်း၍ ရှာဖွေသော် ည်း တော်တော်နှင့် မတွေ့ရပဲ (၂၄) နာရီခန့်ကြာပြီးနောက် ယနေ့ နေ့လည်(၁) နာရီဝန်း ကျင်မှာ သေဆုံး သူရဲ့ အလောင်းကို အဆိုပါချောင်းအတွင်းမှ ပြန်လည် ရှာဖွေတွေ့ရှိကာ ဆယ် ယူနိုင် ခဲ့ကြ တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ယခု သေဆုံး သွားတဲ့နေ ရာဟာ ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီ (၁၃)ရက်နေ့က ကလေးလေး တစ်ယောက် ရေ နစ်မျှော ပါသေ ဆုံး သွားတဲ့ နေရာရဲ့ အနီးအနားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါ တယ်။ ရေနစ်သေဆုံးသူကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် ဆေးရုံသို့ သယ်ယူသွားကာ ရင်ခွဲ စစ်ဆေးခြင်း များပြု လုပ်ပြီး သေဆုံးသူရဲ့ နာရေးကိစ္စကို တာချီလိတ်မြို့ရှိ မဇ္ဈိမလူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ကူညီဆောင် ရွက်ပေး မှာဖြစ်ပြီး နက်ဖြန်မှာ သင်္ဂြိုဟ်မှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။